Flow With The Sprit Of Water Ubuciko Bomphakathi - Umagazini Design
Ubuciko Bomphakathi Imvelo yomphakathi imvame ukungcoliswa ukungaboni ngasolinye nabangaphakathi kwezakhamuzi zabo okuphumela ezinxushunxushweni ezibonakalayo nezingabonakali endaweni ezungezile. Umphumela ongazi walesi sifo ukuthi izakhamuzi ziphinda zibuyele ekungasebenzi kabusha. Lokhu kuguga okwenzeka ngokwejwayelekile kanye nokuhambahamba komzimba kuthonya umzimba, ingqondo nomoya. Imihlahlandlela yemifanekiso ebunjiwe, umkhwenyana, ahlanze, futhi aqinise i- "chi" enhle yesikhala, igxile emiphumeleni emnandi nenokuthula. Ngokushintsha okucashile emvelweni wabo, umphakathi uqondiswa ekulinganiseni phakathi kwangempela labo langaphakathi nangaphandle.
Igama lephrojekthi : Flow With The Sprit Of Water, Igama labaklami : Iutian Tsai, Igama leklayenti : Chang yih hi-tech industrial park.
Ubuciko Bomphakathi Iutian Tsai Flow With The Sprit Of Water